Mazda ကားတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ SKYACTIV ဆိုတဲ့နည်းပညာက ဘာလဲ
8 Nov 2018 . 3:26 PM
Mazda လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ တွေ့ရများတဲ့ Mazda3၊ Mazda6နဲ့ Mazda CX-5 တို့လို ကားတွေကို ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။ Mazda ဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၈ နှစ်ကျော်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ အခြေစိုက် မော်တော်ကားကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Mazda ဟာ Mazda cares for you, Mazda car for the family. ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေနဲ့အညီ ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး ကား Brand တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာလည်း Mazda Myanmar က တရားဝင် ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့် လမ်းပေါ်မှာ Mazda ကားတွေကို အရင်ကထက် ပိုပြီးတွေ့လာရပါပြီ။ Mazda ကားတွေမှာသုံးထားတဲ့ SKYACTIV ဆိုတဲ့ နည်းပညာတွေက ကားမှာပါတဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်အသုံးပြုနေစဉ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ စက်သုံးဆီခြွေတာရေးအပိုင်းတွေမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
Mazda ဖန်တီးထားတဲ့ SKYACTIV နည်းပညာအောက်မှာတော့ Engine ၊ Drive (Transmission) ၊ Chassis နဲ့ Body ဆိုပြီး တစ်ဆင့်ခြင်း ခွဲထားပါသေးတယ်။
Engine ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ Mazda ရဲ့ SKYACTIV-G နည်းပညာက ဆီအသုံးပြုမှုကို လျှော့ချပေးရင်း Engine စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသာမန် Engine တွေထက် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးထားတာပါ။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် မောင်းနှင်တဲ့အခါမှာလည်း စိတ်ကျေနပ်စေသလို ဆီစားနှုန်းကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။
ကားတစ်စီးကို မောင်းနှင်စေဖို့အတွက် Transmission က အခရာကျပါတယ်။ Transmission က ကားကို အရှိန်အမျိုးမျိုးမှာ ချောမွေ့အောင်မောင်းနှင်နိုင်စေဖို့အပြင် ဆီအသုံးပြုတဲ့အပိုင်းမှာလည်း အရေးပါပါတယ်။ SKYACTIV-Drive ဆိုတဲ့နည်းပညာကြောင့် Mazda ကားတွေမှာပါတဲ့ Transmission တွေက မောင်းနှင်တဲ့အခါ ချောမွေ့မှုနဲ့ မြို့တွင်းမောင်းနှင်မှုလို အရှိန်နှေးတဲ့အခါတွေမှာ ဆီစားသက်သာစေမှုတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးထားတာပါ။
ကားတစ်စီးရဲ့ ကိုယ်ထည်ကြံခိုင်မှုအတွက် SKYACTIV-Body နည်းပညာက အထောက်အကူဖြစ်အောင် အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။ တောင့်တင်းပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ကားကိုယ်ထည်က မောင်းနှင်တဲ့အခါတိုင်းမှာပျော်စရာကောင်းပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေမှာပါ။ SKYACTIV-Chasis နည်းပညာကြောင့်လည်း မြန်နှုန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကားကိုမောင်းနှင်နေတဲ့အခါမှာ ကားကိုယ်ထည်တည်ငြိမ်စေဖို့နဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းကိုရနိုင်စေဖို့အတွက် အသေးစိတ်တွက်ချက်ပြီး ဖန်တီးပေးထားတာကြောင့် Mazda ကားတွေကို မောင်းနှင်တဲ့အခါတိုင်း စိတ်ကျေနပ်စရာအခိုက်အတန့်တွေကိုခံစားရင်း ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို အရောက်သွားနိုင်တော့မှာပါ။
Mazda ကားတှမှော တှရေ့တတျတဲ့ SKYACTIV ဆိုတဲ့နညျးပညာက ဘာလဲ
Mazda လို့ပွောလိုကျတာနဲ့ လမျးတှပေျေါမှာ တှရေ့မြားတဲ့ Mazda3၊ Mazda6နဲ့ Mazda CX-5 တို့လို ကားတှကေို ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။ Mazda ဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့ ၉၈ နှဈကြျောက စတငျတညျထောငျခဲ့တဲ့ ဂပြနျနိုငျငံ အခွစေိုကျ မျောတျောကားကုမ်ပဏီကွီးဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျတော့ Mazda ဟာ Mazda cares for you, Mazda car for the family. ဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျတှနေဲ့အညီ ယုံကွညျစိတျခရြဆုံး ကား Brand တဈခုအဖွဈ ရပျတညျနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
ပွညျတှငျးဈေးကှကျမှာလညျး Mazda Myanmar က တရားဝငျ ရှိနပွေီဖွဈတာကွောငျ့ လမျးပျေါမှာ Mazda ကားတှကေို အရငျကထကျ ပိုပွီးတှလေ့ာရပါပွီ။ Mazda ကားတှမှောသုံးထားတဲ့ SKYACTIV ဆိုတဲ့ နညျးပညာတှကေ ကားမှာပါတဲ့ အဓိကအစိတျအပိုငျးတှအေတှကျဖနျတီးပေးထားတာဖွဈပွီး မျောတျောယာဉျအသုံးပွုနစေဉျ အန်တရာယျကငျးရှငျးရေးနဲ့ စကျသုံးဆီခွှတောရေးအပိုငျးတှမှော အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
Mazda ဖနျတီးထားတဲ့ SKYACTIV နညျးပညာအောကျမှာတော့ Engine ၊ Drive (Transmission) ၊ Chassis နဲ့ Body ဆိုပွီး တဈဆငျ့ခွငျး ခှဲထားပါသေးတယျ။
Engine ပိုငျးနဲ့ပတျသကျလို့တော့ Mazda ရဲ့ SKYACTIV-G နညျးပညာက ဆီအသုံးပွုမှုကို လြှော့ခပြေးရငျး Engine စှမျးဆောငျရညျကိုသာမနျ Engine တှထေကျ ပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးထားတာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျကွောငျ့ မောငျးနှငျတဲ့အခါမှာလညျး စိတျကနြေပျစသေလို ဆီစားနှုနျးကိုလညျးသကျသာစပေါတယျ။
ကားတဈစီးကို မောငျးနှငျစဖေို့အတှကျ Transmission က အခရာကပြါတယျ။ Transmission က ကားကို အရှိနျအမြိုးမြိုးမှာ ခြောမှအေ့ောငျမောငျးနှငျနိုငျစဖေို့အပွငျ ဆီအသုံးပွုတဲ့အပိုငျးမှာလညျး အရေးပါပါတယျ။ SKYACTIV-Drive ဆိုတဲ့နညျးပညာကွောငျ့ Mazda ကားတှမှောပါတဲ့ Transmission တှကေ မောငျးနှငျတဲ့အခါ ခြောမှမှေု့နဲ့ မွို့တှငျးမောငျးနှငျမှုလို အရှိနျနှေးတဲ့အခါတှမှော ဆီစားသကျသာစမှေုတှအေတှကျ အထောကျအကူဖွဈအောငျ ဖနျတီးပေးထားတာပါ။
ကားတဈစီးရဲ့ ကိုယျထညျကွံခိုငျမှုအတှကျ SKYACTIV-Body နညျးပညာက အထောကျအကူဖွဈအောငျ အားဖွညျ့ပေးထားပါတယျ။ တောငျ့တငျးပွီး ပေါ့ပါးတဲ့ကားကိုယျထညျက မောငျးနှငျတဲ့အခါတိုငျးမှာပြျောစရာကောငျးပွီး အန်တရာယျကငျးစမှောပါ။ SKYACTIV-Chasis နညျးပညာကွောငျ့လညျး မွနျနှုနျးအမြိုးမြိုးနဲ့ ကားကိုမောငျးနှငျနတေဲ့အခါမှာ ကားကိုယျထညျတညျငွိမျစဖေို့နဲ့ အတှအေ့ကွုံကောငျးကိုရနိုငျစဖေို့အတှကျ အသေးစိတျတှကျခကျြပွီး ဖနျတီးပေးထားတာကွောငျ့ Mazda ကားတှကေို မောငျးနှငျတဲ့အခါတိုငျး စိတျကနြေပျစရာအခိုကျအတနျ့တှကေိုခံစားရငျး ကိုယျသှားခငျြတဲ့နရောကို အရောကျသှားနိုငျတော့မှာပါ။